Unicode & Zawgyi | TechSectors
5:35 PM LeaveaComment
Unicode နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ရင်ထဲမှာ အပြည့်ပဲ - ဒီ Thread ကို စတွေ့တည်းက ဝင်ပြောချင်တာ - ဒါပေမယ့် မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး - ရေးမယ်လုပ်တော့လည်း ကိုယ်ပြောမယ့် စကားတွေက ဘာကိုမှ ကြီးကြီးမားမား မရည်ရွယ်ပေမယ့် စာဖတ်သူတွေက သူတို့ ဘာသာသူတို့ လိုရာအဓိပ္ပါယ် ကောက်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်/အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို တိုက်ခိုက်သလို ထင်သွားမှာ စိုးမိတယ် - ကိုယ့် ထမင်းကိုယ်စားပြီး လူမုန်းတော့ မခံချင်ပါဘူး - ခုနောက်ထွက်တဲ့ Unicode ဟာ ကိုသက်နောင် ပြောခဲ့ပြီးသလို International standard ဖြစ်တာ မှန်တယ် - အားသာချက်တွေ အများကြီး ရှိတာ မှန်တယ် - လူပြိန်းစကားနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော် Unicode ကို သဘောကျတာ International standard ဆိုတာကြောင့် မဟုတ်ဘူး - သူ့လက်ကွက်ကိုက ရိုက်ရလွယ်တာ - စနစ်လည်း အများကြီး ကျတယ် - တစ်ခြား အားသာချက်တွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပေါ့ - ဒါပေမယ့်ဗျာ - ကျွန်တော် ဘာကို သဘောမကျလဲ ဆိုတော့ စနစ်တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ကူးပြောင်းတယ်ဆိုတာ -ဒါကကောင်းတယ် ရော့ဒါသုံး ဒါကိုလုပ် ဆိုပြီး ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ မရဘူး - ပြောရရင် ဒါက ရေခဲချောင်း စားနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို သူ့လက်ထဲက ရေခဲချောင်းယူပြီး ကောက်ညှင်းကျည်တောက် ပြောင်းစားခိုင်းတာနဲ့ တူနေတယ် - ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ဗျာ - ရေခဲချောင်းထက်လည်း ဈေးပိုကြီးတယ် လူတိုင်းသိတယ် - စားလို့လည်း ပိုကောင်းတယ် - အရသာလည်း ပိုရှိတယ် - ဗိုက်လည်း တကယ်ပြည့်တယ် မှန်တယ် - ဒါပေမယ့် ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ဆိုတာ ဒီအတိုင်းကြီး ကိုင်စားလို့ မရဘူးဗျ - အထဲက ကောက်ညှင်းသားကို ရဖို့ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ ကောက်ညှင်းသားကို အပြင်က ရံထားတဲ့ ဝါးကျည်တောက်အခွံလေးကို ရောင်းတဲ့သူက သေသေချာချာ ခွာပေးရတယ် - ရလာတဲ့ ကောက်ညှင်းသားကိုမှ သကြားလေး/အုန်းသီးလေး ဖြူးပေးရတယ် - အဲ့လို လုပ်ပြီး ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေး - ဖက်လေးနဲ့ သေသေချာချာ ထုပ်ပေး - သွားကြားထိုးတံလေး စိုက်ပေးလိုက်တော့မှ ကလေးက စမ်းစားကြည့်ပြီး ရေခဲချောင်းထက် ပိုစားလို့ ကောင်းပါလားဆိုတာ သိလာမှာပေါ့ - အခွံမခွာရသေးတဲ့ ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ကြီး ကလေးကို ထိုးပေးကြည့်ပါလား - ဘယ်လိုစားရမယ်မှန်း သူသိပါ့မလား - အရသာရှိမှန်း သူနားလည်ပါ့မလား ?? လူကြီးကိုကြောက်လို့သာ လွှင့်မပစ်ရင် မပစ်မယ် - သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ရေခဲချောင်း ဆက်စားချင်စိတ်က ရှိနေဦးမှာပဲ - "Unicode - ဇော်ဂျီ - Developers နဲ့ Users" တွေအားလုံးကို အဲ့ဥပမာနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ရင် -
Unicode = ကောက်ညှင်းကျည်တောက်
ဇော်ဂျီ = ရေခဲချောင်း
Developers = ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ရောင်းသူ နဲ့
Users = ကလေး
ဆိုပြီး ရတယ် - ခု Unicode - Unicode ဆိုပြီး Blog လောကမှာ တစ်ခေတ်ထလာတာ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး - အတိအကျပြောရရင် မြန်မာကျူတိုရီရယ်က စာရေးအလွန်ကောင်းပြီး စေတနာ အပြည့်ထားတဲ့ စာရေးသူ ကိုသီဟ 31 Dec 2010 မှာရေးခဲ့တဲ့ ကျွန်ုပ်နှင့် ယူနီကုတ် ခရီးစဉ်ကနေ စခဲ့တဲ့ လို့ ဆိုရမယ် - ပြောရရင် ကိုသီဟက Unicode နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်လေး ရှင်းပြရှာတယ် - သူနဲ့ တစ်ခြား စာရေးသူတွေ ရေးခဲ့တဲ့ Unicode နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် - တကယ်တမ်းပြောရရင် Unicode က ကိုသီဟ အဲ့လို မရှင်းပြခင် ဟိုးနှစ်တွေကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ - တော်ယုံ ဘယ်သူမှ Unicode ကို စိတ်မဝင်စားကြဘူး - ဘာလို့ စိတ်မဝင်စားကြလဲ စေတနာထားပြီး နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြမယ့်သူမှ မရှိပဲ - Unicode ခုလို အောင်မြင်လာတာဟာ ပြောရရင် ကိုသီဟတို့ကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ရမယ် - မြန်မာတွေက ပြောရရင် တစ်ယောက်ကောင်း/တစ်ဖွဲ့ကောင်း အရမ်းနေကြတယ် - အားလုံးက ဆရာပဲ - တပည့်မရှိဘူး - ကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုဘူး - တပည့်မွေးရင်လည်း အဲ့ တပည့်က ကိုယ့်ကိုကျော်မှာ သေရမှာထက် ကြောက်ကြတယ် - ဆရာစားချန် ဆိုတာတောင် မြန်မာစကားမှာ ရှိသေးတယ်မလား - မြန်မာတွေက ပြောရရင် ကောက်ညှင်းကျည်တောက်သာ ရောင်းချင်တာ အခွံခွာပေးရကောင်းမှန်းကျ မသိကြဘူး - စားချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ခွာစားဆိုတဲ့ အချိုးမျိုး အမြဲလုပ်ကြတယ် - Unicode အကြောင်းနဲ့ သုံးစွဲပုံ သုံးစွဲနည်းတွေ - အားသာချက် အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်လာတာ ပြောရရင် ကိုသီဟအဲ့ ပို့စ်ကို ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှ လို့တောင် ပြောလို့ ရတယ် - အရင်ကလည်း မရှိဘူးလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် ဟိုနေရာ စစ ဒီနေရာ စစ - Unicode အကြောင်း သိချင်ရင် Blog တကာပတ်ရတယ် - ပတ်ပြီးဖတ်လို့လည်း ကောက်ညှင်း ကျည်တောက်ကြီး အခွံမခွာရသေးပဲ လက်ထဲ ရောက်လာတာမျိုးနဲ့ တူတဲ့ Unicode က ပိုကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုက လွဲရင် ဘာမှဂဃနဏ မသိရဘူး -
ပြောရရင် ဇော်ဂျီကနေ Unicode ပြောင်းတယ်ဆိုတာ လူအများလက်ခံထားပြီးသား - အသားကျ ထားပြီးသား - အထူးသဖြင့် အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ယဉ်ပါးပြီးသား စနစ်ဟောင်းတစ်ခုကို စနစ်သစ်ရှိရာဆီ ပြောင်းလဲယူရမှာ - ဒီလို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ တတ်သိပြီးသားလူတွေ နားလည်ယုံ တစ်ခုတည်းနဲ့ မရဘူး - ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောရရင် နလပိန်းတုန်း ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူမျိုးတွေ နားလည်နိုင်အောင်ပါ ဖြေရှင်းချက်တွေ လုပ်ဆောင်နည်းတွေ ရှိပြီးသား ဖြစ်နေရမယ် - လူတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ လိုက်သုံးယုံနဲ့ ယူနီကုတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်လို့ မရသလို - အောင်မြင်ပါပြီ လို့လည်း သတ်မှတ်လို့ မရဘူး - ဥပမာ ပြရရင် - www.myanmardaily.net ကို သွားကြည့် - သူပြထားတဲ့ links တွေထဲမှာ Unicode ပြောင်းပြီး သုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Blog ဘယ်နခု ရှိသလဲ - လက်ချိုးရေလို့ ရအောင်ကို နည်းနေသေးတယ် - ဒါတင်မကသေးဘူး - Blog တို့ Forum တို့ထက် အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိတဲ့ မြန်မာဝီကီတောင် ခုထက်ထိ ဇော်ဂျီနဲ့ Unicode ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းကွဲနေတုန်း - အဲလို ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက စနစ်ဟောင်း တစ်ခုကနေ စနစ်သစ် တစ်ခုကို ပြောင်းယူရာမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွှေ့မယူပဲ ချက်ချင်း မိုးပေါ်ကကျ လာသလို ဖွဟဲ့ ဆိုပြီး ပြောင်းခိုင်းလို့ အဲလိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာ - တကယ်တော့ Unicode ကို Standard ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ ကြာကြာလြှပီ - ခုမှ Users တွေ Unicode အကြောင်း - အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ အကြောင်း သိရတော့ ( ဒါတောင် အပြည့်အစုံ မဟုတ်သေး ) မိုးပေါ်က ကျလာသလို ဖြစ်ပြီပေါ့ - Unicode ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားဖူးသူတိုင်း Unicode ကို ပြောင်းဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီး စာဖတ်ရတယ်ဆိုတာ သိလိမ့်မယ် - Users တွေဘက်က ကြည့်ရင် Unicode ကောင်းတယ် ဆိုတာ သိတယ် - အားသာချက်တွေ ရှိတာ မှန်တယ် - ဒါပေမယ့် လက်ရှိစာရေးနေသူ Blogger တွေ - Contributors တွေ ဘက်က ကြည့်ရင် အရင်ရေးထားပြီးသား အကြောင်းအရာတွေကို ဇော်ဂျီကနေ Unicode ကို ပြန်ပြောင်းယူဖို့ဆိုတာ အလုပ်ပိုကြီး တစ်ခုပဲ - မလုပ်ပဲဒီအတိုင်း ထားလို့ကလည်း မရဘူး - ဘလော့က Unicode နဲ့ ဇော်ဂျီ နှစ်ပိုင်းကွဲသလိုဖြစ်နေမယ် - အဲ့လို အလုပ်ပိုတွေအတွက်က ဘယ်မှာလဲ Help Center - ဘယ်မှာလဲ လူပြိန်းနားလည်အောင် ဒိုင်ခံရှင်းပြမယ့်သူ - နေရာတွေ မရှိဘူး မဟုတ်ဘူး - မေးလို့ရမယ့် နေရာတွေ ရှိတော့ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် တစ်ခုမသိတိုင်း တစ်ခါသွားမေးနေရင် အိုသေရချည်ရဲ့ - တကယ်တမ်းက အထက်မှာ ပြောခဲ့ပြီးသလို စနစ်ဟောင်းတစ်ခုကနေ စနစ်သစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် ကြီးမားတဲ့ ကူးပြောင်းမှု ဆိုတာ မကူးပြောင်းခင် တည်းက ဖြစ်လာနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေ - Users တွေအတွက် ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြဿနာတွေ အားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ ဘက်ပေါင်းစုံက ပြည့်စုံသလောက်နီးပါး အဖြေရှာထားပြီးသား/ဖြေရှင်းပေး ထားပြီးသား ဖြစ်နေဖို့ လိုကိုလိုတယ် - Unicode သမားတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာတမ်းဖြေကြည့်ပါ - အဲ့လိုကဏ္ဍအားလုံးအတွက် စံပြုလောက်တဲ့ ပြည့်စုံမှုမျိုး တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေပြီလား ?? - ဒါက Developers တွေကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြတာ - ခု Unicode မှာက အားသာချက်တွေ ရှိတာ မှန်ပေမယ့် ပြဿနာရပ်တိုင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်တွေ မပြည့်စုံသေးဘူး - ပြောရရင် ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ အခွံခွာထားပြီးသား ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ကြီးပဲ ရှိသေးတယ် - သူတို့က သကြားတို့ အုန်းသီးတို့ ဖြူးမပေးထားသေးဘူး - အဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဒီ ကောက်ညှင်းကျည်တောက် ကို ကောင်းမှန်း သိရင်တောင် စားချင်စိတ် မရှိသေးဘူး - ကျွန်တော် ဒီရေခဲချောင်းပဲ ဆက်စားနေမိဦးမှာပဲ - နောက်တစ်ချိန် စာရိုက်ယုံ တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပဲ ကဏ္ဍအသီးသီး မှာ ဇော်ဂျီကနေ Unicode ကို ကူးပြောင်းဖို့ လုပ်ဆောင်ရ လွယ်ကူမယ့် စံပြုလောက်တဲ့ ရှင်းလင်းချက် တွေ ဒီ့ထက်ပို တွေ့လာရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ကောက်ညှင်းကျည်တောက်လည်း သကြားဖြူးပြီးသား ဖြစ်ပြီပေါ့ - အကောင်းကြိုက်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ - Users အားလုံးပါလာဖို့ ဆိုတာ ဒီအခြေအနေက အရေးအကြီးဆုံးပဲ - လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့ စနစ်ဟောင်း တစ်ခုကနေ ဒီ့ထက်ပိုကောင်းမယ့် စနစ်တစ်ခုရှိရာဆီ ကြီးမားတဲ့ ကူးပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးမှာဆို သူရဲကောင်းတွေ စတေးခံကြရတယ် - ပညာရေးမှာဆို ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကြရတယ် - နည်းပညာနယ်ပယ်မှာတော့ Developers တွေ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကြိုးစားကြရလိမ့်ဦးမယ် - ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ရေခဲချောင်း ဆက်စားဖြစ်တော့မယ် မထင်ဘူး
image credit: rakhinetharlaydiary.freehostingcloud.com
How to Internet Sectors